Disney sy Miyazaki mitazona aingam-panahy Crayon | Famoronana an-tserasera
Disney manompo toy ny loharanon'ny aingam-panahy ho an'ny mpanao sary marobe, ankoatry ny fisarihana ny sain'ny mpankafy marobe eran'izao tontolo izao izay mankamin'ny tambajotra sosialy na tranokala hijerena io teboka hafa omen'ny mpanakanto an'io mpilalao manokana io amin'ny iray amin'ireo sarimihetsika amin'ity sarimiaina sy sary mihetsika malaza ity.
Dada dia iray amin'ireo mpanakanto izay dia aingam-panahy avy amin'ny sarimihetsika Disney, fa amin'ity indray mitoraka ity dia mitondra an'i Hayao Miyazaki amin'ny sary vitsivitsy noforonina tamin'ny pensilihazo miloko izay amoronany tarehin-droa roa amin'ny tarehy iray ihany. Hevitra tena nisy tany am-boalohany izay mitondra antsika any amin'ireo mpivady Disney malaza indrindra sy ireo izay tsara tarehy avy amin'ny Studio Ghibli.
Ny hatsarana sy ny bibidia dia ny ohatra tonga lafatra mba hampisehoana ny sanganasan'i Dada amin'ny pensilihazo miloko. Eo afovoan'ny tarehy no ahitantsika an'i Bella raha amin'ny ampahany hafa kosa dia ahitantsika ny biby, handeha mivantana amin'ny sary miaraka amin'ny famaranana lehibe sy ny famoronana am-boalohany.
Toy izany koa no mitranga amin'ny Princess Mononoke izay ahitantsika ny andriambavy sy ny amboadia mitovy endrika amin'ny fanamboarana tsara tarehy iray hafa amin'ny alàlan'ireo loko voafantina tsara ireo sy ny antsipiriany lehibe amin'ny biby mihitsy.
Manana mazava hafa isika miaraka amin'i Tarzan sy Kerchak mankany mihodina amin'ny lafiny voajanahary kokoa avy amin'ilay sarimihetsika Disney mahafinaritra. Fametahana kalitao avo lenta izay mametraka antsika eo alohan'ireo mpilalao sarimihetsika misy sary mihetsika.
Nomena mampiseho ny fitiavam-po amin'ny sary ary ho an'ireo endri-tsoratra malaza. Manana sna Instagram hanaraka azy ary hahita bebe kokoa amin'ny asany, ao anatin'izany ny horonan-tsary ahafahanao manakaiky kokoa ny sariny.
Manana hevitra misimisy kokoa momba anao ianao fomba samy hafa avy amin'ny sary amin'ny Disney avy amin'ity ary avy Ity hafa. Eto Miyazaki miaraka amin'ny hatsarany amin'ny sary mihetsika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Mashups nanentana ny sary avy amin'ny sarimihetsika Disney sy Hayao Miyazaki